Nei Yakagadziriswa Sisitimu Yekutengesa? | Martech Zone
Nei Yakagadziriswa Sisitimu Yekutengesa?
Chishanu, July 6, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Chii revatema kushambadzira? Wikipedia inozvitsanangura semutengi centric, dhata inotyairwa nzira yekutaurirana nevatengi. Yakabatanidzwa kushambadzira iko kufambidzana nekubatanidzwa kweese ekushambadzira ekushambadzira maturusi, nzira, mashandiro uye masosi mukati mekambani kuita chirongwa chisina musono chinowedzera kukanganisa kune vatengi nevamwe vashandisi vekupedzisira nemutengo wakaderera.
Nepo tsananguro iyi ichitaura zvazviri is, haina kutaura sei tinozviita.
Kubva kuNeolane: Mazuva ano mushambadzi ane dambudziko (kana mukana) wekusvika vatengi vavo kuburikidza nezvingaite senge isingagumi nhamba yemakambani ekushambadzira. Vatengesi vanofanirwa kuisa mutengi pachigaro chemutyairi, vachivabvumidza kusarudza kuti uye sei kana vachishuvira kugamuchira ruzivo rwakakodzera uye / kana kutenga. Ndiro basa remushambadzi kuwedzera iyi yese data iripo nezve vatengi uye tarisiro yekutaurirana navo kuburikidza neaya akasarudzika makanhi nenzira iri mbiri inoenderana uye yakanyanya kugadzirirwa.
Chikonzero nei tichizviita? Mhedzisiro. Icho chokwadi ndechekuti kushanda mukati mesiro kunokanganisa mutengo weiyo imwechete zano uye hainyatso kukohwa zvakanakira. Nekubatanidza matekinoroji pakutsvaga, zvemagariro, email, nhare, vhidhiyo, uye mamwe masvikiro, mari yekudyara iyi ine mukana wemhedzisiro. Vatengi nemabhizimusi havatengi mune imwe siro… vanoshandisa maturusi ese anodiwa pakutsvaga sarudzo inotevera yekutenga. Kana bhizinesi rako risiri rekubatanidza zvirongwa zvako, mukana wekuita netarisiro wakadzikira zvakanyanya.
Tags: infographicrevatema kushambadzirayakasanganiswa yekushambadzira zanoneolane
Vanofanira Kutengesa Matimu Blog?
MaHwendefa ari Kuchinja Sei Maitiro Ekutenga